समृद्धि फाइनान्सले १३ लाख ८० हजार कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याउँदै, कहिलेबाट दिने आवेदन ? - Arthasansar
समृद्धि फाइनान्सले १३ लाख ८० हजार कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याउँदै, कहिलेबाट दिने आवेदन ?
मंगलबार, २५ जेठ २०७८, १० : २३ मा प्रकाशित
समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडले असार ३ गतेदेखि सेयर लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने भएको छ ।
फाइनान्सले गत मंसिर १० गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म बिक्री खुल्ला गरेकाे अवितरित हकप्रद सेयरमा आवेदन नपरेकाे १३ लाख ८० हजार ७ सय १८ कित्ता संस्थापक समूहकाे सेयरहरू लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्न लागेकाे हाे ।
लगानीकर्ताले असार ३ गतेदेखि असार १० गते बिहीबारसम्म शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
उक्त शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिशेयर एक सय रूपैयाँ तोकिएको छ । लगानीकर्ताले सो वा सो भन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
लगानीकर्ताले न्युनतम एक सय कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा सम्पूर्ण शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
लगानीकर्ताहरुले बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, कमलादी काठमाडौँ, बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका विराटनगर, विरगंज, जनकपुर, विर्तामाेड, धनुषा, हेटाैँडा, नारायणघाट, पोखरा, बुटवल, बागलुङ, घाेराही, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, विरेन्द्रनगर तथा धनगढीका शाखा कार्यालयबाट, ज्योती विकास बैंकको महेन्द्रनगर कञ्चनपुर शाखाबाट र समृद्धि फाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय, हेटौँडा, पुतलीसडक, बुटवल, पोखरा र नारायणघाट शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
फाइनान्सले प्रकाशन गरेकाे सूचना यस प्रकारकाे छ :